खुइलिएको तालुमा घरमै बसी कपाल उमार्ने यो हो सजिलो घरेलु उपाय – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/खुइलिएको तालुमा घरमै बसी कपाल उमार्ने यो हो सजिलो घरेलु उपाय
काठमाडौँ । पहिला पहिला तालु खुईलिने समस्या बुढाबुढीमा मात्र देखिन्थ्यो तर हिजोआज किशोरकिशोरीमा पनि यस्तो समस्या देखिन थालेको छ।
खानपान र जीवनशैलीका कारण कपाल झर्ने समस्याका कारण महिला र पुरुष दुबै तालु खुईलिने समस्याको शिकार भएका छन्।
टाउकोमा कपाल कम हुँदा व्यक्ति उमेरमै बुढो देखिन थाल्छ। हिजोआज कैयौं वैज्ञानिक तरिका ट्रान्सप्लान्टेशन, स्टेम सेल, लेजर ट्रीटमेन्ट लगायतका उपाय आएका छन् जसले गंजापनको उपचार गर्न सकिन्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यी उपाय गर्नु सबैका लागि सुलभ नहुन सक्छ। धेरै खोज र प्रयोगबाट पत्ता लागेका घरेलु उपाय हामी तपाईलाई बताउनेछौं जसको मद्दतले तपाईको खुईलिएको तालुमा कपाल उर्मिन थाल्नेछ। साथै कपाल झर्ने समस्या पनि रोक्नेछ।
मासको दालको पेस्ट
मासको बोक्रा नभएको दाललाई उमालेर पिस्नुहोस् । रातमा सुत्नुपूर्व यस लेपलाई कपालको जरामा लगाउनुहोस्।
कपडा खराब नहोस्, यसको लागि टाउकोमा तौलिया बाँध्नुहोस्। यस्तो केही दिनसम्म लगातार गर्दा कपाल फेरि उम्रिन थाल्छन् र गंजापन कम हुन्छ।
हरियो धनियाँको पेस्ट
हरियो धनियाँको पेस्ट बनाएर कपाल झरेको ठाउँमा लगाउनुहोस्। यस्तो लगातार एक महिनासम्म गर्दा झरेको ठाउँमा कपाल फेरि आउन शुरु हुन्छ।
केरा र कागती
एउटा केरामा कागतीको रस मिसाएर राम्रोसँग पेस्ट बनाउनुहोस्। उक्त पेस्टलाई टाउकोमा लगाउँदा कपाल झर्ने समस्या कम हुन्छ। यस्तो गर्दा झरेको ठाउँमा कपाल उर्मन थाल्छ।
प्याज पनि फाइदाजनक
ठूलो प्याज लिएर त्यसलाई दुई भागमा काट्नुहोस्। नुहाउनुपूर्व शिरको जुन हिस्सामा कपाल झरेको छ, त्यहीँ ठाउँमा आधा प्याजलाई ५ मिनेटसम्म रगड्नुहोस्। यस्तो लगातार केही दिन गर्दा कपाल झर्न बन्द हुन्छ साथै नयाँ कपाल उर्मन पनि थाल्छ।
चेक काटदै हुनुहुन्छ ? होसियार, राष्ट्र बैंकको सूचना पढ्नुहोस
कुन राशिलाई कुन धातु शुभ ? यी राशिका व्यक्तिले सुन लगाउँदा मिल्छ लाभ
‘हाइ हिल’को जुत्ताले निम्त्याउन सक्छ यस्ता समस्या, तपाई पनि लगाउनुहुन्छ ?